Duqeyn ka dhacday Aw-dheegle oo lagu dilay afar al-Shabaab ah – AFRICOM - Halbeeg News
Duqeyn ka dhacday Aw-dheegle oo lagu dilay afar al-Shabaab ah – AFRICOM
MUQDISHO(HALBEEG)- Taliska Ciidamada Mareykanka ee Afrika (AFRICOM), ayaa waxbixin ay xalay soo saareen ku sheegay in duqeyn 4tii Diseember ay ka fuliyeen deegaanka Aw-dhiigle ee gobolka shabeellaha-hoose ay ku dileen afar ka tirsan maliishiyaadka Al-Shabaab.
AFRICOM ayaa sheegay in ay duqeynta ay fuliyeen ka dib markii ay maliishiyaad ka tirsan al-Shabaab oo ku sugnaa Aw-dhiigle ay soo weerareen ciidamadooda iyo kuwa Soomaali ah oo howelgal ka waday duleedka Aw-dhiigle.
AFRICOM ayay hadalkooda ku sheegay in xilligii ay socdeen duqeymaha iyo weerarrada aysan jirin cid rayid ah oo ay waxyeello gaarsiiyeen. Hasayeeshee ma jiraan ilo madaxbannaan oo xaqiijinaya sheegashada Mareykanka ee ah inaaney rayid waxyeelloo u geysan.
Ciidamada Mareykanka oo gacanta siiya kuwa dowladda Soomaaliya ayaa hoosta ka xarriiqay in ay dadaal xooggan ku bixinayaan xasilinta iyo nabadeynta Soomaaliya, si ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ugu suura gasho in ay si buuxda ula wareegaan ammaanka dalkooda kadib ka bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM.
Koonfurta Suudaan oo dib u bilaabeysa isticmaalka Dekadda Dooraale ee Jabuuti